BlueConic: Aruuri, Midee, oo Kor u Qaad Safarka Macaamiisha | Martech Zone
BlueConic: Aruuri, Midee, oo Tayadoow Safarka Macaamiisha
Talaado, Maarso 3, 2015 Talaado, Maarso 3, 2015 Douglas Karr
Iyada oo la adeegsanayo xogta weyn iyo teknoolajiyada qulqulka, waxaa jira nooc cusub oo ah istiraatiijiyad otomaatig ah oo suuqgeyn ah oo bixiya bakhaar dhexe, waqtiga-dhabta ah, halkaas oo isdhexgalka isticmaalaha lagu qabsado iyo khadka tooska ah kadibna farriinta suuq geynta iyo ficilada lagu dabaqo iyaga. BlueConic waa mid ka mid madal noocaas ah. Oo lagu dhajiyay meheradahaaga hadda jira, waxay soo uruurisaa oo ay midaynaysaa isdhexgalka macaamiishaada ka dibna waxay kaa caawineysaa inaad soo saarto farriin suuqgeyn macno leh leh
Awoodda ka jawaab celinta waqtiga-dhabta ah iyo soo qabashada dhibco badan oo xog ah waxay ka caawisaa shirkadaha inay ku hagaan rajadooda ama macaamilkooda safarka macaamiisha si hufan oo wax ku ool ah. Adoo diirada saaraya safarka macaamiisha halkii aad ka noqon laheyd shirkadaada, waxaad saameyn fiican ku yeelan kartaa iibsashada go'aamada iyo, ugu dambeyntiina, inaad kordhiso qiimaha nolosha macaamiishaada.
Laba geeddi-socod oo muhiim u ah BlueConic, Faahfaahin joogto ah iyo Wadahadallo isdaba-joog ah, ayaa kuu suurta gelinaya inaad gudbiso durdur isgaarsiineed oo soo qaata wada hadalka macaamiisha kanaal ilaa kanaal. The BlueConic madalku wuxuu la falgalaa nooc kasta oo tikniyoolajiyad suuq geyn ah; qaadataa hab firfircoon oo horumar leh maaraynta xogta; wuxuuna ku shaqeeyaa waqtiga-dhabta ah, miisaanka.
Laga soo bilaabo Bogga Wax Soo Saarka Buluugga
Ururinta Xogta Isticmaalaha - Ururi oo kaydi labadaba xog la sugay, sida magacyada iyo qiyamka qiyaasta celceliska, iyo xogta habdhaqanka aan la aqoon, sida dhag-biyoodka iyo qaab-dhismeedka. Dhamaan ficiladani waxay ku midaysan yihiin hal muuqaal oo isticmaale ah oo lagu cusbooneysiiyay isdhexgal kasta.
Ururka Aqoonsiga - Ku xidho astaamo badan oo ku milmaan hal. Ururka aqoonsigu wuxuu ku saleysan yahay dabeecadaha isticmaalaha iyo aqoonsiyo gaar ah, xitaa waxaa lagu go'aamin karaa suurtagalnimada. Waxaa abuuray suuqleyda, qawaaniinta isla markaaba waxay ku lifaaqan yihiin astaamo kala duwan.
Fahanka Waxqabadka - Macluumaadku wuxuu u oggolaanayaa suuqleyda inay dib u eegaan isdhexgalka isticmaalaha oo ay u beddelaan fikradaha waxqabadka leh ee fursadaha cusub. Suuqleydu hadda waxay ogaan karaan qaybo cusub, waxay u kuur galayaan isbeddelada ku dhaca hab-dhaqanka isticmaalaha waqti ka dib waxayna abuuri karaan dashboor jajaban si ay ula socdaan wadahadallada kanaalka iskaga gudba waqtiga dhabta ah.
Qaybta Smart - Waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay u kala qaybiyaan kooxaha adeegsadayaasha shaqsiyadeed sida xogta soo galaya la qabto. Qaybinta duulimaadka waxaa lagu suurta galiyay iyadoo la adeegsanayo shuruudo ay ka mid yihiin isticmaalka waxyaabaha ku jira, dhibcaha ka-qaybgalka waqtiga-dhabta ah, heerarka is-beddelka, is-dhexgalka soo noqnoqda, iyo xogta caadiga ah ee dadka ama cilmu-nafsiga.
Had iyo jeer-on Optimization - Si joogto ah u wanaaji isdhexgalka shakhsiyaadka loogu talagalay beddelaadda, helitaanka badeecada, iyo / ama ka-qaybgal ballaadhan. Taariikhda isdhexgalka buuxa ee isticmaale kasta ayaa diyaar u ah isbadal deg deg ah, sii hurinta talooyinka kooxaha isticmaalayaasha isla qeybtaas.
Joogtaynta Ololaha - Joogtee joogteynta ololeyaasha iyo farriimaha inta lagu jiro safarka macaamiisha. Sii socoshadani waxay ubaahantahay iskucelcelinta jawaabaha ololaha ee aaladaha fariimaha kaladuwan, sida websaydhka, emaylka, muujinta, raadinta iyo bulshada.
Tags: aragtiyo ficil ahtallaabooyinkahad iyo jeer-on aynabuluugjoogtaynta ololahago'aannadaurur aqoonsiprofilesqaybsi smartururinta xogta isticmaalaha
14 Dhibaatooyinka Isbeddellada ee Hay'adaha